Sidee Kiniiniyada u badalayaan caadooyinka wax iibsashada | Martech Zone
Sidee Kiniiniyada u badalayaan caadooyinka wax iibsashada
Sabtida, Juun 7, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Haddii Mawduucu yahay King, markaa UX waa inay noqotaa Boqorad. Iyada oo kororka baaxadda leh ee mobilada iyo kiniiniyada, waayo-aragnimada isticmaalaha (UX) ay ku yeelan karto saameynta ugu weyn kobaca iibka ee ka baxsan tayada maaddada lafteeda. Khibradahaas mar dambe lama diidi karo oo waa in tixgelin la siiyaa markaad hagaajineyso joogitaankaaga internetka.
Infograafigani wuxuu ka yimid Monetate: Suuqa sii kordhaya ee kiniinka ayaa ka dhigay fahamka isbeddellada ku saabsan qalabka qalabka inay muhiim u yihiin marka la hagaajinayo degel si loo abuuro khibrad macaamiisha ku habboon Infographic-kan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan caadooyinka dukaamada kiniiniyada, oo ay ku jiraan xog gaar ah oo cusub Lacagta EQ warbixinta.
Tags: Ganacsigaecommerceipad iibka statsipad iibsigaipad adeegsiga dhaqankaganacsiga kiniinkakiniin iibsigaganacsiga
Maxay Tahay Waxyaabaha Raadinta iyo Raadinta Twitter-ku MA AHAN beddelaad ciyaar